FAHAzoan-dàlana hipetrahan'ny mponina any Etazonia
avy amin'ny mpanoratra: Max Csern 11 Mey 2021
Misy safidy maro hahazoana fahazoan-dàlana hipetraka any Eropa. Ny sasany sarotra, ny sasany kosa tsotra. Miankina amin'ny fitsipiky ny fifindra-monina amin'ny fanjakana manokana izany, ny fiainam-pianaran'ny mpangataka ary ny antony manosika azy hifindra. Noho izany, tsy misy fomba fahandro iraisana momba ny fomba hahazoana fahazoan-dàlana hipetraka any Eropa haingana sy mora kokoa. Any amin'ny fanjakana sasany, ity fomba ity dia ho somary tsotra ho an'ny Rosiana, amin'ny hafa kosa ho sarotra amin'ny fepetra fanampiny isan-karazany. Rehefa avy nandinika ny lalàna mifehy ny fifindra-monina any amin'ny firenena eropeana efatra sy ny zava-niainan'ireo mpiray tanindrazana nifindra tany dia nanao fanadihadihana lalina izahay. Aorian'ny famakiana azy dia ho hitan'ny mpamaky hoe aiza no mora indrindra hahazoana fahazoan-dàlana hipetraka sy trano maharitra any Eropa. Ny antony mety hamoahana ny fahazoan-dàlana hipetrahan'ny manampahefana mpifindra monina amin'ny fanjakana iray manokana sy ny vidin'ny fomba fanao dia aseho eto ihany koa.
Fahazoan-dàlana hipetraka any amin'ny firenena eropeana
Safidy hahazoana fahazoan-dàlana hipetraka any Eropa be dia be. Ny sasany sarotra, ny sasany kosa tsotra. Miankina amin'ny fitsipiky ny fifindra-monina amin'ny fanjakana manokana izany, ny fiainam-pianaran'ny mpangataka ary ny antony manosika azy hifindra. Noho izany, ny fomba fahandro iraisan'ny rehetra dia haingana sy mora azo Fahazoan-dàlana hipetraka any Eropa, tsia. Any amin'ny fanjakana sasany, ity fomba ity dia ho somary tsotra ho an'ny Rosiana, amin'ny hafa kosa ho sarotra amin'ny fepetra fanampiny isan-karazany. Rehefa avy nandinika ny lalàna mifehy ny fifindra-monina any amin'ny firenena eropeana efatra sy ny zava-niainan'ireo mpiray tanindrazana nifindra tany dia nanao fanadihadihana lalina izahay. Aorian'ny famakiana azy dia ho hitan'ny mpamaky aiza ny fomba mora indrindra hahazoana fahazoan-dàlana hipetraka и Fonenana maharitra any Eropa... Ny antony mety hamoahana fahazoan-dàlana hipetrahan'ny manampahefana mpifindra monina amin'ny fanjakana iray manokana sy ny fitambaran'ny vidin'ny fomba fanao dia aseho eto ihany koa.
Tombontsoa amin'ny fahazoan-dàlana hipetraka any Eropa
Betsaka ny antony ahazoan'ny Rosiana fahazoan-dàlana hipetraka ao amin'ny Vondrona eropeana. Ireto no tena lehibe:
Fari-pitsipika sy kalitaon'ny trano hipetrahana.
Toekarena marin-toerana, misy fiatraikany tsara amin'ny fiforonan'ny orinasa.
Mety hananana trosa indram-bola amin'ny zana-bola ambany.
Ny fahaizana manokatra petra-bola any amin'ny banky eoropeanina miaraka amin'ny isa ambony azo itokisana.
Fiantohana azo antoka amin'ny tahiry manokana, petra-bola, fampiasam-bola ary fananana manokana.
Fitsangatsanganana tsy misy visa maimaimpoana any amin'ny fanjakana eropeana sy firenena maro manerantany izay namarana ny fifanarahana nifanaovana tamin'ny Vondrona Eropeana.
Fahazoana fampianarana sy fitsaboana tsara kalitao, asa be karama.
Ho an'ny olona maro, ny fahazoan-dàlana ao amin'ny EU dia dingana voalohany mankany amin'ny fahazoana zom-pirenena eoropeanina.
Aiza ny toerana mora indrindra sy ny fomba hahazoana fahazoan-dàlana hipetraka
Ny fanontaniana hoe aiza no fomba mora indrindra hahazoana fahazoan-dàlana hipetraka dia somary mampiady hevitra. Ilaina ny mandray an-tsaina ny haavon'ny fiadanan'ny mpifindra monina, ny taona, ny fanabeazana, ny satan'ny fiaraha-monina ary ny nuansa fanampiny hafa. Amin'ny ankapobeny, fifantina henjana kokoa ary, arak'izany, sakana birao maro kokoa no misy any amin'ireo firenena manankarena ara-toekarena izay tsy mila mahasarika mpifindra monina. Anisan'izany ny Fanjakana Mitambatra, Suède, Luxembourg, Holland. Mandritra izany fotoana izany, ny fahazoan-dàlana eoropeanina dia azo omena araka ny programa manokana miasa amin'ny fanjakana maromaro. Ny tanjon'ny programa toy izany dia ny hisarihana ireo manam-pahaizana manam-pahaizana amin'ny tsena anatiny. Ary koa, ny fahazoan-dàlana hipetraka any Eropa dia matetika omena an'ireo mpampiasa vola manankarena izay afaka manambola vola iray amin'ny toekarem-panjakana. Amin'ny salan'isa, ny habeny dia manomboka amin'ny 350 €, ary ny endrika fampiasam-bola dia tsy mitovy. Anisan'ireo safidy lehibe ahazoana fahazoan-dàlana hipetraka any Eropa, mila milaza ianao:
Fividianana trano tsy azo ovaina ao amin'ny EU ho an'ny sandany tsy latsaky ny vola raikitra. Ity dia iray amin'ireo fomba mahazatra indrindra hahazoana fahazoan-dàlana hipetraka ao amin'ny vondrona eropeana. Mety amin'ny Rosiana manankarena maro izay te-hifindra any amin'ny Vondrona Eropeana.
Fampiasam-bola amin'ny toekarena eo an-toerana. Ahafahanao, ankoatry ny fahazoana fahazoan-dàlana hipetraka, dia mahasoa ihany ny mampiditra ny tahirinao amin'ny tahiry Eoropeana na amin'ny orinasa azo antoka.
Fisoratana anarana ny orinasanao ary famoronana asa ho an'ny mponina. Ny tombony lehibe amin'ity safidy ity dia ny fahafahan'ny mpandraharaha mampivelatra ny orinasany manokana amin'ny toe-javatra mety amin'ny fitoniana ara-toekarena, tsy fisian'ny kolikoly ary ny sakana amin'ny birao.
Fanambadiana sy olompirenena na olom-pirenena amin'ny firenena eropeana.
Ny fahazoana fahazoan-dàlana hipetraka any Eropa amin'ny alàlan'ny fandaharana manokana izay manome famaranana ny fifanarahana malalaka miaraka amin'ny mpampiasa eo an-toerana. Ireo mpiasa an-tsokosoko izay miasa mandritra ny fotoana maharitra dia tsy mendrika handray izany fepetra izany.
Fampiraisana ny fianakaviana. Ity fahafaha-manao ity dia azo ampiasaina amin'ny havanao akaiky ny teratany EU - vady aman-janaka, ary indraindray ny ray aman-dreny (mpisotro ronono, mahantra, sembana).
Fanabeazana amin'ny andrim-panabeazana miaraka amin'ny fankatoavana avy amin'ny fanjakana. Any amin'ny fanjakana sasany dia omena fahazoan-dàlana hipetraka ao amin'ny EU ihany koa handraisana lesona hianarana sy hanatsarana ny fiteny eo an-toerana.
Asa siantifika ao anatin'ny fifanarahana miaraka amin'ny fikambanana fanabeazana na fikarohana.
Asa mifandraika amin'ny fijanonana amin'ny faritry ny firenena eropeana. Ireo mpiasa ao amin'ny sampana diplaomatika sy solontena ofisialy (siantifika, orinasa, kolontsaina) dia tafiditra ao anatin'io sokajy io.
Fitsaboana maharitra sy fanarenana maharitra.
Fahazoan-dàlana hipetraka ao amin'ny EU ho an'ny fahamendrehana manokana. Izy io dia omena amin'ny alàlan'ny tsirairay, matetika amin'ny didim-panjakana manokana an'ny filoham-panjakana na amin'ny alàlan'ny didim-panjakana parlemantera.
Fahazoan-dàlana ho an'ny firenena - hitahiry ny maha-izy azy eo amin'ny firenena na ny kolontsaina
Rehefa nahazo fahazoan-dàlana hipetraka, ny vahiny dia mahazo zaka hanome trano maharitra any Eropa avy eo, ary koa safidy maro hafa. Ohatra, ny olona toy izany dia afaka mahazo tany amin'ny fananana manokana ary manao hetsika hafa manan-danja ara-dalàna izay tsy azon'ny vahiny hafa idirana. Manaraka izany, hodinihinay ny nuansa fahazoana fahazoan-dàlana hipetraka any Eropa, izay mora sy mora kokoa ny manao izany.
Ny safidy faran'izay be mpitia indrindra amin'ny fahazoana fahazoan-dàlana aostraliana dia RWR-Karte. Io ilay antsoina hoe "karatra mena-fotsy-mena" navoaka ho an'ireo manam-pahaizana manam-pahaizana. Ireo mpangataka amin'ny RWR-Karte dia tsy maintsy mandefa fanamarinana amin'ireo masoivohon'ny governemanta momba ny fanajana ny fenitra arak'asa efa napetraka, izay misy fepetra isan-karazany.
Vidiny. Ny fisoratana anarana fahazoan-dàlana hipetraka miaraka amin'ny karatra mena-fotsy-mena dia mitentina € 30 ka hatramin'ny 100 €.
Fepetra. Matetika, ny mpandraharaha dia mangataka io fomba fananganana voajanahary io any Aotrisy. Takiana izy ireo hahazo hevitra amin'ny departemantam-panjakana momba ny tombotsoan'ny asa aman-draharaha ho an'ny toekarem-pirenena.
Ho an'ny olona manana vola be dia be - tsy mamela azy ireo hiasa sy hanao orinasa any Austria ny satan'izany. Navoaka arakaraka ny fehezan-dalàna voafetra voafetra an'ny fanjakana federaly tsirairay. Ny mpangataka dia takiana hanome porofo fanadihadiana momba ny vola miditra isam-bolana farafahakeliny 2000 € ho an'ny olona tsirairay ao amin'ny fianakaviany. Ao amin'ny iray amin'ireo banky miasa any Aostralia dia tsy maintsy misy 20 10 € farafahakeliny ho an'ny olon-dehibe ary XNUMX ho an'ny zaza tsy ampy taona.
Karatra manga. Ireo manam-pahaizana voakarama dia azo raisina raha manana fanasana ofisialy avy amin'ny mpampiasa Australiana izy ireo, amin'ny fifanarahana asa izay ny vola miditra isam-bolana dia tsy latsaky ny 4100 €.
Ny mety hanitarana ny fahazoan-dàlana azo dia miankina amin'ny ambaratongan'ny fampidirana ny teratany vahiny amin'ny fiainan'ny fiarahamonina eo an-toerana. Tokony hatsaranao tsy tapaka ny fahaizanao miteny, tendreo ny ankizy any amin'ny andrim-panabeazana eo an-toerana, hamoaka politika momba ny fiantohana ara-pahasalamana sy ara-tsosialy.
Ny fomba mahazatra indrindra hahazoana fahazoan-dàlana hipetraka ao amin'ny Fanjakana Belzika dia:
Fifanarahana asa miaraka amin'ny mpampiasa belza.
Fividianana orinasa ara-barotra efa voasoratra anarana any Belzika.
Manokatra ny asanao manokana eto, miankina amin'ny fanesorana hetra isan-taona farafahakeliny 90 €. Izany hoe, mba tsy angano ilay orinasa, fa miasa am-pahavitrihana.
Ny vidin'ny fisoratana anarana - manomboka amin'ny 30 €.
Fepetra. Ny famoahana fahazoan-dàlana hiasa ao amin'ny fanjakan'i Belzika dia voafetra tanteraka. Ny quota bebe kokoa dia natokana ho an'ireo manam-pahaizana manokana miasa amin'ny sehatry ny IT-teknolojia, fahasalamana, olona manana fanabeazana injeniera. Azo atao ihany koa ny mahazo fahazoan-dàlana hipetraka ho an'ireo mpianatra misoratra anarana amin'ny anjerimanontolo Belzika.
Somary mora kokoa ny mahazo fahazoan-dàlana hipetraka eto noho ny any Eropa Andrefana. Ny antony lehibe hanomezana azy eto dia:
Fahafahana misitraka tombony amin'ny fisotroan-dronono.
Fividianana trano sy tany.
Fisoratana anarana biraon'ny solontenan'ny orinasam-barotra manana fisoratana anarana tsy maintsy atao amin'ny manampahefan'ny hetra.
Manomboka orinasa amin'ny famoronana toerana am-polony mahery ho an'ny olom-pirenena Bolgara
Famaranana ny fikambanam-panambadiana amin'ny olom-pirenena / Bulgaria sivily na firenena eropeana rehetra.
Ny fisian'ny foko bolgara.
Fepetra. Ny mpangataka dia voatery mahafeno ny fepetra takiana, arakaraka ny antony anaovana fifindra-monina. Ny fananana trano any Bulgaria - na tompony na amin'ny fanofana maharitra, ary ny fitaovana hiainana. Raketo an-tsoratra ny haavon'ny fidiram-bolanao ary mangataha politika momba ny fiantohana. Ny fe-potoana fandinihana ny fangatahana natolotra dia tsy mihoatra ny 1 volana.
Vola. Raha ny antony hividianana fahazoan-dàlana dia ny fividianana trano, dia tsy maintsy mihoatra ny 300 € ny sandany. Ho an'ny mpampiasa vola dia 125 € ny tokonam-bidy ambany ary tokony ho faritra tsy mandroso ireo fa tsy renivohitra sy ivon-toerana lehibe. Ny fahazoana trano na famatsiam-bola dia tsy vitan'ny olona irery fa ny fikambanana ara-dalàna. Avy eo ny zon'ny fahazoan-dàlana hipetraka dia alain'ny tompona ity rafitra ara-barotra ity, izay manana mihoatra ny 50% ny renivola nomeny alàlana. Ho an'ireo vahiny mangataka izany noho ny antony hafa dia ilaina ny manana mihoatra ny 2 hetsy euro amin'ny petra-bola.
Sarotra ny fahazoana zom-pirenena anglisy. Ny fomba tsara indrindra hahazoana fahazoan-dàlana hipetraka eto dia ny fampiasana ny tolotra VIP. Ity fomba tsotra ity dia ny fahazoana toerana ao anatin'ny valo herinandro ho takalon'ny famatsiam-bola lehibe. Ireto safidy manaraka ireto dia azo atao:
Fividianana ny fiarovana ny governemanta.
Fividianana ny fizarana amin'ny famatsiam-bola eo an-toerana.
Ny fahazoana tombony amin'ny orinasa voasoratra anarana amin'ny nosy ary mponina ao amin'ny hetra UK.
Fepetra. Rehefa mampiasa vola dia ny renivohitra manokana ihany no azonao ampiasaina fa tsy vola indramina. Ny antom-pisian'ny vola nampidirina dia tsy maintsy atao antontan-taratasy. Rehefa mahazo fahazoan-dàlana hipetraka any Angletera ny mpivady iray, dia raisina avokoa ny fananan'izy ireo.
Vola. Mba hahazoana fahazoan-dàlana britanika amin'ny alàlan'ny fanolorana VIP tsotra, mila mampiasa vola 2 tapitrisa farafahakeliny ianao amin'ny fampandrosoana ara-toekarena ao amin'ny firenena. Ny hafainganam-pandehan'ny fanomezana ny toerana onenana maharitra manaraka azy dia mifanitsy amin'ny haben'ny fananana napetraka:
2 ka hatramin'ny 5 tapitrisa pounds - 5 taona.
5 ka hatramin'ny 10 tapitrisa - 3 taona,
Maherin'ny 10 tapitrisa - 2 taona.
Angamba ity firenena ity no safidy tsara indrindra ho an'ireo Rosiana manontany tena momba ny fahazoan-dàlana hipetraka any Eropa: aiza no mora sy mora kokoa ny mahazo izany. Any Hongria, azo atao ny mamoaka azy haingana araka izay azo atao noho ny any amin'ireo fanjakana eropeana hafa - afaka telo herinandro monja. Ireo preferences dia omena ny olona izay manana vola iray.
Vola. Ny haben'ny fampiasam-bola dia tokony mihoatra ny 300 € isaky ny fianakavian'ilay mpangataka. Fanampin'izany, vola aloa indray mandeha 60 € no aloa.
Fepetra. Ny programa fifindra-monina ara-toekarena dia manome famatsiam-bola mivantana amin'ny volam-panjakana miaraka amina fiverenana azo antoka ao anatin'ny dimy taona. Rehefa avy nanome fahazoan-dàlana hipetraka ao anatin'ny telo herinandro dia afaka mangataka trano maharitra ny mpampiasa vola aorian'ny enim-bolana. Safidy hafa dia ahitana:
Manokatra orinasa ara-barotra manana renivohitra nahazoana alàlana 10 XNUMX Euros farafahakeliny. Tsy maintsy manao hetsika ara-barotra mavitrika izy ary mandoa hetra amin'ny teti-bola. Ny fahazoan-dàlana hipetraka dia tsy omena ho an'ny tompona orinasa ihany, fa ho an'ny fianakaviany iray manontolo koa.
Fividianana trano izay mifanaraka amin'ny fepetra takiana. Tsy voafaritra eto ny tokonam-bidy farafahakeliny, fa ny salan'isan'ny trano any ambanivohitra Hongroà dia tsy mihoatra ny 25 €. Ankoatr'izay, ny kaontin'ny mpangataka sy ny havany akaiky dia tsy maintsy manana mihoatra ny 6 €.
Amin'ireo tranga etsy ambony ireo, ny fahazoana trano onenana maharitra dia afaka aorian'ny telo taona, sy ny zom-pirenena hongroà - afaka 5 taona. Izany dia manome valo taona.
Miavaka i Alemana amin'ny fari-piainan'ny mponina avo lenta ary, arak'izany, olona marobe izay te-hifindra eto mba hipetraka maharitra. Noho izany, somary sarotra ny mahazo fahazoan-dàlana hipetraka any Alemana, indrindra amin'ny zava-nitranga vao haingana - fidiran'ny mpifindra monina tsy voafehy avy any amin'ny faritra Afovoany Atsinanana sy Afrika. Ny safidy mora indrindra hahazoana fahazoan-dàlana hipetraka any Eropa amin'ny alàlan'ny serivisy fifindra-monina alemanina dia ny fampiasam-bola amin'ny toekarena alemanina farafahakeliny tapitrisa €. Noho izany, azonao atao ny manokatra orinasa misy teratany alemanina dimy miasa ao. Toe-javatra iray hafa: ny olom-pirenena ao amin'ny Repoblika Federalin'i Alemana na ny olona manana toerana onenana maharitra dia mety ho lasa CEO.
Safidy hafa azo atao:
Fanalefahana ara-bola. Ny habetsaky ny vola farafahakeliny ao amin'ny kaontin'ny mpangataka dia napetraka tsy miankina amin'ny tany tsirairay amin'ny Repoblika Federalin'i Alemana.
Karatra manga. Natolotra ho an'ireo matihanina tena mahay ihany no nasain'ny mpampiasa iray avy any ivelany.
Fampiasam-bola amin'ny orinasa amin'ny faritra manokana. Ny mpangataka dia tsy maintsy salama ara-bola, manana traikefa amin'ny orinasa, ary manome drafitra fandraharahana amin'ny antsipiriany. Nanomboka tamin'ny 2012 ny ambaratonga fampiasam-bola farafahakeliny ho an'ity toe-javatra ity dia nofoanana.
Azonao atao koa ny mahazo fahazoan-dàlana hipetraka eto noho ireto antony manaraka ireto:
Fianarana amin'ny andrim-pampianarana eo an-toerana.
Fampiraisana ny fianakaviana.
Fanomezana fialokalofana ara-politika.
Manohitra ny zava-misy any amin'ireo firenena eropeana hafa, toa manintona tokoa ny tolotra fifindra-monina ataon'ny manampahefana grika. Azo atao ny mahazo fahazoan-dàlana hipetraka ao amin'ny Vondrona eropeana ao anatin'ny iray volana. Izany dia mitaky fampiasam-bola amin'ny vola amin'ny trano sy toekarena grika. Ity dia mety:
Famoronana orinasam-pandraharahana vaovao na fividianana efa misy. Ny habetsaky ny fandaniana dia tsy maintsy mihoatra ny 300 €.
Fividianana trano ho an'ny 250 500 € isaky ny mpangataka, na XNUMX arivo ho an'ny fianakaviana.
Fepetra. Ny mpampiasa vola dia omena ny tombony be indrindra. Ny fepetra takiana amin'ny fonenana an-tery any Gresy mandritra ny 183 andro isan-taona dia nofoanana. Ny safidy toy izany miaraka amin'ny mety ho 100% dia manome antoka ny fanomezana fahazoan-dàlana hipetraka.
Safidy hafa. Ireo mpifindra monina manankarena ara-bola dia afaka mametraka farafahakeliny 24 20 euro ao amin'ny kaontiny any amin'ireo banky grika. Raha kasaina hiaraka amin'ny ankohonana iray manontolo ny fifindra-monina, dia ho faly ny hampiasa vola 15% ho an'ny vady ary 2% hafa ho an'ny zaza tsy ampy taona. Tokony hanana antontan-taratasy manamarina ihany koa ny vola miditra isam-bolana mihoatra ny XNUMX € eo ho eo.
Raha ny politikan'ny fifindra-monina dia ity fanjakana skandinavianina ity no heverina ho fanjakana mpandala ny nentin-drazana indrindra sy mihidy EU. Ny fanomezana fahazoan-dàlana hipetraka eto dia mifandray amin'ny quota hentitra. Ny fomba tsotra indrindra hahazoana fahazoan-dàlana mipetraka any Danemark dia ny fampiasam-bola amin'ny asa aman-draharaha: manokatra ny orinasanao manokana eto, mividy orinasa ara-barotra misy na ampahany amin'ny anjarany.
Vola. Ny fampiasam-bola farafahakeliny dia tsy maintsy mihoatra ny 50 €.
Fepetra. Ny orinasa hosokafana dia tsy maintsy manana teratany danoà ao amin'ny fanjakana, ary koa manaraka ny fepetra takiana amin'ny hetra, asa ary lalàna hafa ao amin'ny firenena. Ny fahazoan-dàlana hitrandrahana raha misy fampanjariam-bola dia omena mandritra ny 12 volana, ary tsy maintsy havaozina isan-taona mandritra ny 3 taona.
Araka ny lalàna Irlandey, hahazoana fahazoan-dàlana hipetraka dia avela hampiasaina ny fampiasam-bola mitambatra: fampiasam-bola amin'ny toekarena sy ny fahazoana trano.
Vola. Ny vidiny farafahakeliny farafahakeliny iray tapitrisa €. Amin'ireny, tsy mihoatra ny 50% no avela holaniana amin'ny trano, ary ny ambiny kosa dia tokony handeha amin'ny endrika fampiasam-bola amin'ny harinkarenan'ilay nosy. Ity dia mety amin'ny fividianana fiarovana ara-barotra na fanjakana na tsy miankina, fividianana tsatoka amin'ny orinasa, na orinasa miasa iray manontolo.
Fepetra. Ny fampiasam-bola dia tokony hatao raha tsy mampiasa vola indramina. Ny mpampiasa vola dia tsy maintsy mampiseho antontan-taratasy manamarina ny fampiasam-bolany manokana fa tsy ny volan'ny banky. Ho an'ny mpianakaviny dia omena alalana hipetraka tsy misy fandoavambola sy fampiasam-bola hafa.
Ho an'ny fividianana trano amin'ny vola iray any Espaina, azo atao ny mahazo "permis de golden résidence". Azonao atao ny mividy trano, trano sy tany fivarotana, na tany.
Vola. Ny fampiasam-bola faran'izay kely indrindra hahazoana fahazoan-dàlana "fahazoan-dàlana volamena" dia 500 €.
Fepetra. Ny faharetan`ny ny fomba tsy mihoatra ny iray volana. Aorian'ny fahazoana io satano io dia ampy ny hijanonan'ny vahiny any Espana tsy mihoatra ny 1 andro isan-taona. Ny satan'ny nahazo dia tsy manome fotoana hirotsahana amin'ny hetsika asa rehetra. Mila fahazoan-dàlana misaraka izany. Aorian'ny 5 taona dia afaka mangataka trano maharitra ianao, ary raha niaina tao amin'ny fanjakana nandritra ny 10 taona ianao dia afaka mangataka ny zom-pirenena Espaniola.
Fividianana ny trosan'ny governemanta mitentina € 2 tapitrisa.
Fampiasam-bola mihoatra ny € 1 tapitrisa amin'ny anjaran'ny orinasa Espaniôla na fahazoana anjara amin'ny renivohitra nahazo alàlana.
Manokatra petra-bola ao amin'ny iray amin'ireo bankin'ny fanjakana amin'ny vidiny 1 tapitrisa €.
Fananganana orinasa any amin'ny fanjakana miaraka amin'ny famoronana asa ho an'ireo teratany Espaniôla. Ny lalàna mifindra dia tsy mamaritra ny haben'ny tetik'asa fampiasam-bola amin'ny resaka vola, fa ny orinasa kosa dia tsy maintsy mihetsika mavitrika amin'ny fanomezana vola miditra amin'ny hetra amin'ny teti-bola. Tsy maintsy atao koa ny manaraka ny kaody momba ny asa sy ny fepetra takian'ny lalàna eo an-toerana.
Araka ny lalàna mifindra amin'ny fifindra-monina italiana, ny fanomezana fahazoan-dàlana hipetraka eto dia fomba fanao manokana iray, raha jerena ireo lafin-javatra maro. Noho izany, ny mpangataka dia tsy mahazo antoka fanapahan-kevitra tsara 100% amin'ny fangatahana natolotra. Miorina amin'ny traikefa nahazo fahazoan-dàlana italianina, azontsika atao ny milaza fa ny fomba tena zava-misy dia ny mitady asa amin'ny fikambanana eo an-toerana. Ny fifanarahana asa miaraka amin'ny vahiny dia manome: ny fanomezana fitsaboana, ny fanomezana trano sy fiarovana ara-tsosialy. Azonao atao ny mamarana fifanarahana alohan'ny hidiranao any Italia sy rehefa tonga any amin'ilay toerana.
Safidy hafa. Manokatra ny orinasanao ara-barotra. Ny fampiasam-bola voalohany amin'ny orinasa dia tsy maintsy mihoatra ny 10 euro. Ianao koa dia mila maka fahazoan-dàlana avy amin'ny manampahefana eo an-toerana hanokatra orinasa sy hanome fahazoan-dàlana an'ity karazana hetsika ity. Indraindray ireo dingana roa ireo no tena manahirana indrindra.
Sipra koa dia manana programa fampiasam-bola manokana, ahafahanao manome fahazoan-dàlana hipetraka eto ho takalon'ny fahazoana trano.
Vola. Ny preferences amin'ny fahazoana fahazoan-dàlana hipetraka dia omena amin'ny famaranana ny taratasy fividianana trano miaraka amin'ny trano 300 € na mihoatra. Ny fepetra iray fanampiny dia porofom-panadihadiana momba ny fidiram-bola isan-taona mihoatra ny 15 €, miampy 5 arivo € iray isaky ny mpianakavin'ny mpangataka iray.
Fepetra. Raha feno ny fepetra napetraka dia misy fanapahan-kevitra tsara momba ny fangatahana natolotra tao anatin'ny telo volana. Ny fahazoana trano amin'ny vidiny hatramin'ny 300 dia manome ihany koa ny fahazoana fahazoan-dàlana hipetraka, fa miaraka amin'ny antoka ambany ary miaraka amin'ny fandinihana maharitra. Ary koa, ny sata dia afaka havoaka mandritra ny herintaona, miaraka amin'ny filàna fanavaozana manaraka.
Amin'ity repoblika any Baltika ity, rehefa mividy trano amina vola mitentina 250 € dia avela hahazo "permis de résidence golden". Fepetra fanampiny:
Zavatra fananana iray ihany no vidiana amin'ity vidiny ity.
Fady ny mividy tany tsy misy fivoarana sy tsy mandroso.
Ny vidin'ny cadastral an'ny fananana novidina dia tokony mihoatra ny 80 €.
Vola. Rehefa mividy zavatra tsy azo ovaina ho fananana, ny mpangataka fahazoan-dàlana hipetraka any Latvia dia tsy maintsy mandoa sarany 5% amin'ny vidiny. Izany hoe, miaraka amin'ny vidiny ambany indrindra azo alefa 250, dia 12,5 €.
Fomba hafa. Fampiasam-bola amin'ny orinasa eo an-toerana amin'ny habetsaky ny 35 € farafaharatsiny. Amin'ity tranga ity dia tsy maintsy fenoina ihany koa ireto fepetra manaraka ireto:
Ny mpiasa ao amin'ny orinasa dia mihoatra ny olona 50.
Ny vola miditra isan-taona an'ny orinasa dia 10 tapitrisa € farafahakeliny.
Ny vola miditra isan-taona amin'ny teti-bola - hatramin'ny 40 €.
Rehefa mampiasa vola amin'ny orinasa mihoatra ny 150 Euros, ny mpangataka dia afaka mahazo fahazoan-dàlana hipetraka any Letonia tsy misy fepetra fanampiny.
Eto dia avela hangataka fahazoan-dàlana hipetraka rehefa manokatra fikambanana ara-barotra misy asa telo ho an'ny olom-pirenena litoanianina. Mandritra izany fotoana izany dia maharitra 4 volana ny fisoratana anarana ny sata.
Vola. Ny haben'ny fampiasam-bola voalohany amin'ny orinasa dia tsy maintsy mihoatra ny 28 €.
Fepetra. Ny vahiny iray dia manan-jo hangataka fahazoan-dàlana hipetraka enim-bolana aorian'ny fanokafana ny orinasany any Litoania. Ny anjarany ao an-drenivohitry ny orinasa dia tsy maintsy mihoatra ny 1/3, raha mpikambana ao amin'ny birao na talen'ny tenany izy tenany.
Safidy hafa. Azonao atao koa ny mividy orinasa efa vonona any Litoania, na manokatra biraon'ny solontenan'ny orinasa misoratra anarana any amin'ny firenena hafa. Amin'ireny tranga ireny dia mitohy ny fepetra takiana - ny famoronana toerana 3 amin'ny mpiasa ho an'ny olom-pirenena litoanianina.
Ho an'ireo vahiny manankarena any Luxembourg dia omena azy ireo ny fanomezana fahazoan-dàlana hipetraka nefa tsy manan-jo hiasa sy hanao raharaham-barotra. Ny mpangataka dia tsy maintsy manao antontan-taratasy ny toe-bolany sy mividy trano amin'ity duchy ity.
Vola. Ny mpangataka fahazoan-dàlana mipetraka any Luxembourg dia tsy maintsy manana mihoatra ny 25 € amin'ny kaontiny.
Safidy hafa. Fahazoan-dàlana ho an'ny vazaha ny fahazoana fahazoan-dàlana hipetraka miaraka amin'ny zon'ny asa, rehefa vita ny fifanarahana asa iray amin'ny iray amin'ireo fikambanana eo an-toerana. Tokony hiasa toy ny mpiasa ny mpifindra-monina.
Any Malta, omena fahazoan-dàlana hipetraka tsy ho an'ny fividianana ihany, fa na dia rehefa manofa trano aza.
Vola. Ho an'ny tanàna sy faritra samihafa ao amin'ny firenena dia misy ambaratonga samihafa ho an'ny fampiasam-bola amin'ny fividianana trano sy tany. Manomboka amin'ny 220 ka hatramin'ny 275 euro izy ireo. Rehefa manofa trano, ny haban'ny fandoavana fanofana isan-taona dia tsy maintsy mihoatra ny 9,6 € € any amin'ireo tanàna lehibe indrindra, ary 8,7 any ambanivohitra. Araka ny lalàna Maltese, ny mpanofa iray izay nahazo fahazoan-dàlana hipetraka dia tsy maintsy mandoa haba 15 Euros ho an'ny fianakaviana iray manontolo isan-taona ihany koa.
Fepetra. Ny fisoratana anarana fahazoan-dàlana hipetraka avela alohan'ny fividianana na fampanofana. Amin'ity tranga ity, ny fampiharana dia dinihin'ireo manampahefana mifindra monina ao anatin'ny 8 volana. Raha ankatoavina, ny vazaha dia tsy maintsy, ao anatin'ny taona manaraka, mividy trano eto ho fananany manokana na hofan-trano. Raha tsy izany dia ho foanana ny satan'ny.
Safidy hafa. Ny fahazoan-dàlana hipetraka any Malta dia azo alaina ihany koa amin'ny mponina maharitra ao amin'ny firenena izay manana ambaratongam-pahasalamana. Ny ambaratonga farafahakeliny ho an'ny fidiram-bola isan-taona dia tsy tokony ho ambany noho ny 25 €. Ankoatr'izay, amin'ny fomba hafa, ny mpangataka dia mety hanana tahiry manokana mihoatra ny antsasaky ny tapitrisa euro. Raha mikasa ny hifindra any Malta miaraka amin'ny fianakavianao ianao, dia miampy 150 XNUMX izany ho an'ny mpikambana tsirairay ao aminy. Vao tsy ela akory izay, ny programa fifindra-monina "Fahazoan-dàlana hampiasa vola", dia natomboka teto amin'ny nosy.
Misy ny fenitra eken'ny EU ho fahazoana fahazoan-dàlana hipetrahana - asa, fianarana any amin'ny toeram-pampianarana eo an-toerana, fanatambatra fianakaviana, sns. Anisan'ny tolotra manokana ny fahazoan-dàlana hipetrahan'ny mpandraharaha vahiny maniry ny hanokatra ny orinasany ao amin'ity fanjakana ity. Ny endrika fanaovana asa be mpitia indrindra eto dia ny LLC. Amin'ny ankapobeny, maharitra efa-bolana ny fanokafana fiarahamonina.
Vola. Ny kapitalin'ny orinasam-barotra amin'ny fisokafany dia tsy maintsy mihoatra ny 18 €.
Ny lalànan'ny fifindra-monina any Polonina dia mamela ny fanomezana fahazoan-dàlana hipetraka amin'ny mpandraharaha vahiny raha toa ka tompony na mpitantana ny orinasa izy.
Vola. Ny haavon'ny kapitalin'ny orinasa voasoratra anarana any Polonina dia tsy maintsy mihoatra ny 1300 €, ary ny salanisan'ny salanisa isan-taona dia 13 €.
Fepetra. Ny mpiasan'ny orinasa vahiny dia tokony ho teratany poloney roa farafaharatsiny. Rehefa afaka 5 taona, ny mpandraharaha vahiny dia manan-jo hangataka trano onenana.
Safidy hafa. Fomba iray hafa ny fanokafana orinasam-barotra, izay misy olom-pirenena poloney, na iray amin'ireo firenena eropeana, hotendrena ho talen'ny birao na talen'ny birao. Ny fehezan-dalàna amin'ny fisoratana anarana dia tsy miova.
Misy programa fifindra-monina hahazoana fahazoan-dàlana hipetraka any Eropa ao anatin'ny fotoana fohy. Ka, rehefa mividy trano, dia afaka mahazo fahazoan-dàlana hipetraka ao anatin'ny roa volana ny vahiny. Ankoatr'izay, izany dia mihatra tsy ho an'ny mpangataka irery, fa avy hatrany amin'ny fianakaviany iray manontolo nefa tsy misy sarany fanampiny.
Vola. Afaka mividy zavatra iray na maromaro indray mandeha ianao. Ny fepetra dia ny vidin'ny fividianana rehetra dia tsy maintsy mihoatra ny 250 €. Ny vidiny fanampiny amin'ny fisoratana anarana ny sata dia 10 Euros hafa.
Fepetra. Ilaina ny mividy alohan'ny handefasana fampiharana amin'ny serivisy fifindra-monina. Ny fangatahana fahazoana ny satan dia tsy maintsy apetraka alohan'ny fandaniana 90 andro manomboka amin'ny andro nidirana ao amin'ny firenena.
Ny fanomezana tombana ny fahazoan-dàlana hipetraka Portiogey dia omena ihany koa ho an'ireo mpampiasa vola izay nanambola farafahakeliny iray tapitrisa euro amin'ny harinkarem-pirenena. Ny endrika fampiasam-bola dia mety misy - ny fividianana ny fizarana na ny fiarovana hafa, tsatoka amin'ny orinasa ara-barotra Portiogey.
Manokatra orinasa any Portugal manome toerana 10 mihoatra ny olom-pirenena Portiogey. Ny endrika lehibe indrindra anaovan-draharaha eto dia orinasa mpiorina miaraka.
Ny fahazoana fahazoan-dàlana romanianina dia fomba sarotra tokoa. Mpamatsy vola vahiny eto dia tantanan'ny serivisy manokana an'ny governemanta ARIS. Ireo mpiasan'izy ireo dia mijery akaiky ny tetikasa fampiasam-bola naroson'ireo mpandraharaha vahiny.
Vola. Raha hanokatra orinasa na hampiasa vola dia mila mandany 100 XNUMX € farafaharatsiny ny orinasa romana.
Fepetra. Tetikasa fandraharahana amin'ny antsipiriany no natolotra ny manampahefana ARIS, izay manome toerana 15 ho an'ny teratany romanianina. Fahazoan-dàlana hipetrahan'ireo mpandraharaha vahiny mandritra ny herintaona, aorian'izay dia mila havaozina isan-taona mandritra ny 5 taona. Amin'ny faran'ity vanim-potoana ity dia avela hangataka trano onenana maharitra.
Ny fahazoana fahazoan-dàlana hipetraka ao Slovakia dia tsy tanterahina noho ny antony sasany, fa noho ny fanatanterahana tanjona kendren'ny mpifindra-monina:
Manomboka ny orinasanao manokana.
Hetsika siantifika sy fanabeazana.
Azo atao ihany koa ny mahazo fahazoan-dàlana hipetraka ao Slovakia, raha manana karatra manga ao amin'ny Vondrona eropeana ianao, miorina amin'ny fanatambatra ny fianakaviana, amin'ny maha-foko Slovak anao. Ny safidy mora indrindra ho an'ny Rosiana dia ny manokatra sy mitantana ny orinasany any Slovakia. Ny endrika asa laharam-pahamehana amin'ny orinasa dia ny LLC. Matetika ny fisoratana anarana dia tsy mihoatra ny 4-5 volana.
Vola. Ny mpangataka fahazoan-dàlana hipetraka any Slovakia dia tsy maintsy manana farafaharatsiny 23 € ao amin'ny kaonty banky. Ny renivohitra nahazo alàlana ny orinasa nosokafana dia nihoatra ny 5 €.
Fepetra. Ny mpangataka dia tokony hanoratra ny fahavelomany ara-bola, handefa drafitra fandraharahana ho an'ny serivisy fifindra-monina, hividy na hanofa trano honenana ao amin'ny firenena, ary hamoaka politika fiantohana ara-pitsaboana. Ny fahazoan-dàlana hipetraka dia azo omena mandritra ny enim-bolana ka hatramin'ny roa taona, aorian'izay dia tsy maintsy havaozina.
Ny fomba tsotra sy haingana indrindra ahazoana fahazoan-dàlana hipetraka ao Slovenia dia ny fisoratana anarana ny orinasanao eto na mampiasa vola amin'ny orinasa eo an-toerana. Olona roa no afaka mangataka an'io sata io indray mandeha: ny tompona orinasa, izay manana farafahakeliny 51% ny renivohitra nahazo alalana, sy ny taleny. Ny fe-potoana handinihana ny fangatahana hahazoana sata dia mitaky eo ho eo. 1 volana.
Vola. Ny fampiasam-bola amin'ny asa dia tsy maintsy mitentina € 50,0.
Fepetra. Ny olona manokatra na mahazo orinasa any Slovenia dia tsy maintsy mividy na manofa trano ipetrahana eto ihany koa. Ny fahazoana fahazoan-dàlana hipetraka dia aorian'ny fisoratana anarana amin'ny fomba ofisialy amin'ny orinasa miaraka amin'ny manampahefana haba. Ity fomba ity dia mety maharitra 3 ka hatramin'ny 5 volana. Fanampin'izany ny satan'ny - manome zon'ny vahiny hiasa ao amin'ny EU.
Karazana fahazoan-dàlana honenana roa no omena eto:
Sokajy "A" - mitohy, navoaka nandritra ny 4 taona. Mora amin'ny fanombohana sy fanaovana raharaham-barotra any Failandy.
Sokajy "B" - vonjimaika, mandritra ny fotoana fiofanana na fiasana amin'ny fifanarahana maharitra.
Ny lalàna momba ny fifindra-monina Finnish dia mahatoky indrindra amin'ireo mpampiasa vola vahiny. Ny isan'ny fandavana hanome fahazoan-dàlana hipetrahana ho an'ny olona toy izany dia fomban-drazana, ary ny fomba hahazoana status dia tsy mihoatra ny enim-bolana ny faharetany.
Vola. Ny kapitalin'ny orinasa iray nosokafan'ny teratany vahiny any Pinlandy dia tsy maintsy mihoatra ny € 2,5, ary ny vola miditra ho an'ny mpangataka dia tokony mihoatra ny € 1,5.
Fepetra. Farafahakeliny ny antsasaky ny mpikambana ao amin'ny birao amin'ny orinasa ara-barotra dia tsy maintsy olom-pirenen'ny Vondrona Eropeana. Ny mpandraharaha vahiny dia tsy maintsy manome tetikasa fandraharahana amin'ny antsipiriany ihany koa. Raha tsy izany, ny lalàna finnish dia tena mahatoky amin'ireo mpampiasa vola vahiny:
Tsy misy fepetra takiana amin'ny haben'ny fihodinan'ny orinasa.
Tsy misy fepetra mialoha amin'ny endrika famoronana asa ho an'ny olom-pirenena Finnish.
Tsy misy ambaratonga ambany ho an'ny sandam-bola.
Ampy ho an'ny orinasa ny miasa, mandeha ny hetra amin'ny teti-bola, ary aloa ny mpiasa.
Manana programa fahazoan-dàlana hipetraka ho an'ny olona manankarena ara-bola i Frantsa. Marina, tsy manome alalana hitarika orinasa manokana na asa izany. Ny fomba fisoratana anarana dia maharitra enim-bolana.
Vola. Any amin'ny banky frantsay rehetra, ny mpangataka dia tokony hanana 30 € farafahakeliny. Miampy ny vola mitovy amin'ny an'ny fianakaviany tsirairay mangataka fahazoan-dàlana hipetraka.
Fepetra. Mba hanamafisana ny fahaizan'ny ara-bola dia mila omena ny mpiasa ao amin'ny andrim-pifindra-monina antontan-taratasy momba ny haavon'ny fidiram-bola, ny faktiora ary ny fifanarahana amin'ny fividianana na hofan-trano honenana any Frantsa.
Fampiasam-bola. Mba hahazoana fahazoan-dàlana honenana dia tokony hampiasa vola 10 tapitrisa € farafahakeliny amin'ny toekarena frantsay ianao. Ny mpampiasa vola dia tsy maintsy mahazo farafahakeliny 30% amin'ny anjara na anjaran'ny orinasam-barotra. Raha orinasa vaovao no atsangana dia tokony ahitana mpiasa mihoatra ny 50 ny mpiasa ao aminy.
Toetra ara-barotra. Notoloran'ny mpitantana ny orinasa sy ny fianakaviany akaiky.
Mpiasa faharoa. Navoakan'ny mpiasan'ny orinasa vahiny, sampana ary birao solontena voasoratra anarana any Frantsa.
Eto, ny olom-pirenena vahiny manam-bola dia afaka mahazo fahazoan-dàlana mora foana rehefa misoratra anarana amin'ny orinasa ara-barotra any Kroasia.
Vola. Ny ambany indrindra amin'ny renivohitra nahazo alàlana dia tsy latsaky ny 2,7 arivo €.
Fepetra. Ny mpangataka fahazoan-dàlana hipetraka dia manana anjara farafahakeliny 51% amin'ny orinasa voasoratra anarana any Kroasia. Raha tratra io fepetra io dia mahazo fahazoan-dàlana mamela ny fitantanana sy ny hetsika varotra ny vahiny. Mandritra izany fotoana izany dia tsy voarara raha manana anjara 100 isan-jato amin'ny renivohitra vahiny ny orinasa.
Safidy hafa. Azo atao ny mangataka fahazoan-dàlana hipetrahan'ny vahiny mihazona toerana fitantanana ao amin'ny orinasa iray misoratra anarana ao Kroasia. Ny haben'ny karama dia tokony ho eo amin'ny haavon'ny salan'isa nasionaly, izany hoe, manodidina ny 1,1 €. Ny kapitalin'ny fikambanana nosokafan'ny teratany vahiny dia tokony mihoatra ny 13 €, ary ny mpiasa ao aminy dia misy teratany Kroaty telo.
Mora kokoa ny mangataka fahazoan-dàlana hipetrahana ho an'ny mpampiasa vola any amin'ny Repoblika Tseky raha oharina amin'ny mpangataka hafa. Ny endrika mahazatra indrindra amin'ny asa fandraharahana eto dia ny LLC, satria mandoa hetra be ny mpandraharaha tsirairay. Maharitra iray volana ny fisoratana anarana, miampy roa volana hafa dia mila miandry fahazoan-dàlana hipetraka ianao. Ny fianakavian'ny mpifindra-monina iray manontolo dia afaka mahazo izany sata izany.
Vola. Vidiny tanteraka:
Fisoratana anarana fahazoan-dàlana amin'ny 1 arivo €.
Fisoratana anarana an'ny LLC - 3 arivo, miaraka amina kapitalin'ny 7,5 €.
Fisoratana anarana ny JSC - 5 arivo, miaraka amina kapitalisa 140 €.
Ny mpangataka dia tokony hanana mihoatra ny € 3 ao amin'ny kaonty.
Fepetra. Mila misoratra anarana amin'ny orinasa ianao alohan'ny fangatahana fahazoan-dàlana hipetraka any Czech. Ny mpangataka dia mety ho mpanorina orinasa na talen'ny, miaraka amin'ny fahazoan-dàlana mifanaraka amin'izany.
Ity fanjakana Skandinavianina ity dia iray amin'ireo fanjakana mihidy indrindra amin'ireo mpifindra monina any Eropa. Mba hahazoana fahazoan-dàlana hipetraka eto, ny mpandraharaha dia tsy maintsy misoratra anarana JSC eto.
Vola. Ny fisoratana anarana amin'ny orinasa any Suède dia mitentina 10, hahazoana fahazoan-dàlana hipetraka - € 2 hafa. Ho an'ny olona ao amin'ny fianakaviana dia mila mandoa € 250 fanampiny koa ianao. Ny mpangataka dia tsy maintsy manana mihoatra ny 1250 € amin'ny kaonty, ary iray hafa 21 ho an'ny vady ary 10,5 hetsy isaky ny ankizy.
Fepetra. Ny olom-pirenena ao amin'ny Vondrona eropeana ihany no manan-jo lisitra ho mpitantana ny orinasa.
Ireo olona manapa-kevitra ny hahazo fahazoan-dàlana hipetraka ao Estonia dia omena fotoana tahaka izany hampiasa vola amin'ny toekarem-panjakana.
Vola. Ny habetsaky ny fampiasam-bola farafahakeliny dia avy amin'ny 66 €, amin'ny endrika karazana fananana manaraka:
Volana manokana an'ny mpampiasa vola.
Fampindramambola any ambany.
Ny vidin'ny trano lehibe an'ny orinasa vao nisokatra.
Fepetra. Orinasa voasoratra anarana nefa tsy manome fidiram-bola dia iharan'ny fanaraha-maso avy hatrany satria mety ho fiction. Noho izany, ny orinasa misokatra dia tokony hiteraka fidiram-bola, raha tsy izany dia mety hahavery ny satan'ny fahazoan-dàlana hipetraka ny tompony. Ny mpiasa dia tsy maintsy olom-pirenena Estonianina. Mba hisoratana anarana amin'ny orinasa, ny mpandraharaha vahiny dia tsy maintsy mampiseho drafitra fandraharahana amin'ny antsipiriany, antontan-taratasy momba ny niandohan'ny renivohitra voalohany ary fifanarahana amin'ny fividianana na fanofana habaka honenana any Estonia.
FAHAzoan-dàlana honenana any amin'ny fanjakana eropeana ivelan'ny EU
Any Albania, azo atao ny mahazo fahazoan-dàlana hipetraka amin'ny visa "D" ho an'ireo olona manana tranony manokana eto. Koa satria ity firenena Adriatika ity dia malaza be amin'ireo tia fialan-tsasatra amoron-dranomasina, dia takiana mafy tokoa io safidy io.
Vola. Ao afovoan-drenivohitry ny firenena, ny vidin'ny iray metatra toradroa amin'ny trano fonenana dia avy amin'ny 800 €, ary amin'ny tanànan'ny Tirana - 350. Amin'ny ivom-pialan-tsasatra, ny vidin'ny trano dia mety hiakatra hatramin'ny 1200 € isaky ny metatra toradroa.
Fepetra. Miaraka amin'ny fangatahana dia mila manome taratasy fanamarinana ny fananana ny habaka iainana sy ny habetsaky ny vola hivelomana ianao. Tamin'ny voalohany dia nomena herintaona aorian'ny fanavaozana - indroa kokoa mandritra ny roa taona. Avy eo azonao atao ny mangataka trano onenana maharitra.
Safidy hafa. Mihatra amin'ny mpampiasa vola ihany koa ny tetika notsorinaina hahazoana fahazoan-dàlana Albaney hipetraka. Ny fisoratana anarana amin'ny orinasa vaovao eto dia maharitra mihoatra ny 1-5 andro, ary ny vidiny dia manodidina ny 250-400 €. Ny habetsaky ny kapitalisma dia tsy voafaritra ara-dalàna. Nomena zom-pirenena Albaney avy hatrany ireo mpamatsy vola izay nanambola 100 XNUMX € mahery tamin'ny harinkarem-pirenena.
Amin'ity fanjakana kely Pyreneana ity dia misy safidy maromaro hahazoana fahazoan-dàlana hipetraka:
Fampiasam-bola amin'ny orinasa Andorran.
Fividianana ny fifamatoran'ny governemanta.
Amin'ireo tranga etsy ambony ireo dia manomboka amin'ny 350 € ny habetsaky ny fampiasam-bola farafahakeliny. Ary koa, ny mpangataka dia tsy maintsy manana trano manokana na nohofaina eto, ary honina amin'ny fahefana mandritra ny 90 andro farafahakeliny.
Vola. Ho an'ny kaontim-bola ao amin'ny kitapom-bolam-bola INAF, mila mandefa 50 10 € ho an'ny mpangataka ianao, miampy 36 12 isaky ny mpianakaviny. Misy fepetra takiana amin'ny vola miditra isan-taona eo ho eo: XNUMX arivo ho an'ny mpangataka ary XNUMX arivo ho an'ny olona miankina aminy.
Fepetra. Satria i Andorra dia tsy ao anatin'ny EU, ny fahazoan-dàlana hipetraka dia tsy manome zo hipetraka ao amin'ny Vondrona eropeana. Mba hanaovana izany, dia tsy maintsy mangataka visa Schengen misaraka ianao.
Ny fomba tsotra indrindra hahazoana fahazoan-dàlana hipetraka ao Bosnia sy Herzegovina dia ny fisoratana anarana ny orinasanao ara-barotra. Ny fangatahana atolotra eto amin'ireo mpampiasa vola dia kely dia kely.
Vola. Ny mpangataka dia tokony hanana mihoatra ny 1,5 € ao amin'ny kaonty fametrahana.
Fepetra. Ny hetsika fisoratana anarana matetika dia maharitra 2 ka hatramin'ny 4 herinandro, miampy ny vola mitovy amin'izany dia maka fahazoan-dàlana hipetraka. Izy io dia omena mandritra ny telo taona, raha manana ny tranonao ianao na manana fampanofana mandritra ny enim-bolana na mihoatra.
Safidy hafa. Mividy trano amin'ny vidiny rehetra. Mila mandoa saram-pandoavana 2% amin'ny vidin'ny fividianana ianao ary hatramin'ny iray alina euro ho an'ny asan'ny manam-pahaizana manokana.
Sarotra be ny mahazo fahazoan-dàlana hipetraka any Islandy, na dia mividy trano any amin'ny nosy aza ianao ary manokatra ny orinasanao manokana. Ny firenena dia manana fameperana henjana eo amin'ny sehatry ny fifindra-monina, ary misy ny maningana afa-tsy amin'ireo izay mandray anjara amin'ny fampandrosoana ny makroekolojia i Islandy. Amin'ny tranga hafa, betsaka ny azon'ny mpampiasa vola atao ny manome visa fidirana marobe.
Amin'ny fanjakana micro-alpine, ny safidy mora indrindra hahazoana fahazoan-dàlana hipetraka dia ny asa ofisialy amin'ny orinasa eo an-toerana. Saingy misy ny sakana iray: ny olona efa manana fahazoan-dàlana hipetraka ao an-toerana na amin'ny fanjakana eropeana rehetra no ekena hiasa amin'ny toerana lehibe. Ary koa, ny mpangataka dia mila manana spécialité miavaka izay takiana amin'ny Liechtenstein.
Azo atao ny mahazo fahazoan-dàlana hipetraka eto rehefa misoratra anarana amin'ny orinasa vaovao.
Fepetra. Ny mpangataka dia tsy maintsy tompona trano sy varotra ao amin'ny faritanin'i Makedonia - toerana iray amidy, birao, atrikasa famokarana. Tsy manaiky zom-pirenena roa ny lalàna mifehy ny fifindra-monina Masedoniana. Noho izany, ny Rosiana manapa-kevitra hipetraka amin'ity repoblika Yugoslavia teo aloha ity dia tsy maintsy mahafoy ny pasipaorony rosiana efa misy.
Ny Principality of Monaco dia iray amin'ireo ivon-toerana fialamboly sy filokana amoron-dranomasina. Arak'izany, lafo dia lafo ny vidim-piainana eto, na dia ampitahaina amin'ny France sy Italia akaiky aza. Noho izany, olona manan-katao dia afaka hipetraka eto. Ho fanamafisana ny fahaleovan-tenany ara-bola, ny mpifindra-monina dia tsy maintsy manana kaonty amin'ny vola 250 5 €. Ny fandinihana ny fangatahana natolotra dia maharitra XNUMX herinandro.
Condition. Mba hanokafana orinasa any Monaco dia mila alalana manokana avy amin'ny manampahefana sy ny fividianana birao na trano fivarotana any amin'ny faritry ny fanjakana. Ny kapitalisma farany ambany an'ny orinasa vao nosokafana dia avy amin'ny 15 €. Amin'ny voalohany, omena herintaona ny satan'isa, avy eo maharitra 2 sy 3 taona. Amin'ny faran'ity vanim-potoana ity dia mahazo visa monegasque aleon'ny mpifindra monina izay manan-kery mandritra ny 10 taona. Azo itarina imbetsaka izy io, tsy misy famerana.
Ny fomba tsotra indrindra hahazoana fahazoan-dàlana Norveziana dia ny manokatra ny orinasanao manokana eto.
Vola. Ny vidin'ny fisoratana anarana dia 13 € - izany no tokony ho isan'ny renivohitra nahazo alàlana hisokatra amin'ny orinasa.
Fepetra. Ny mpangataka dia tsy maintsy manana traikefa amin'ny sehatry ny fandraharahana ary tsy maintsy mandefa tetikasa fandraharahana amin'ny antsipiriany hodinihin'ireo tompon'andraikitra norveziana. Ny teratany norvezianina ihany no azo tendrena amin'ny toeran'ny talen'ny talen'ny orinasa.
Ao amin'ny fanjakana kelin'i San Marino, voahodidin'ny sisin-tanin'i Italia, dia mora indrindra ny mahazo fahazoan-dàlana hipetrahan'ny olona manankarena. Mba hanaovana izany dia mila manaporofo ny fisian'ny 500 30 € farafahakeliny ianao, na mividy trano eto amin'ity trano ity mitovy vidiny. Aorian'ny fahazoana fahazoan-dàlana hipetrahana, raha te-hangataka zom-pirenena San Marino dia mila miandry XNUMX taona hafa ianao.
Mba hanomezana fahazoan-dàlana hiaina Serba dia ampy ny mividy orinasa efa miasa eto, na amin'ny fananganana ny orinasanao manokana.
Vola. Ny kapital farany nahazo alalana farany ambany dia tokony ho 500 euro farafahakeliny, ary 1200 € ny fomba fisoratana anarana. Ho an'ny orinasa mpamatsy vola dia avo kokoa ny habetsaky ny renivohitra manana alàlana:
JSC - 10.
CJSC - 25.
Ny kaontin'ny mpandraharaha dia tsy maintsy manana mihoatra ny 3,5 €.
Fepetra. Anisan'ireo fepetra takiana fanampiny: ny fisian'ny tetikasa fandraharahana sy ny trano manokana na hofan-trano any Serbia.
Safidy hafa. Rehefa voaporofo ny maha-irery azy sy manana trano, dia mahazo fahazoan-dàlana maharitra mandritra ny telo taona ilay vazaha. Ny habetsaky ny fividianana trano dia tsy apetraky ny lalàna, na dia efa dinihin'ireo tompon'andraikitra serba aza ny tetikasa toy izany.
Ny fomba tsotra indrindra hahazoana fahazoan-dàlana Tiorka dia ny toerana fohy - tsy mihoatra ny 1 taona. Namoaka azy noho ireto antony ireto izy ireo:
Fanambadiana amin'ny teratany tiorka.
Vola. Mba hahazoana ny satan'izany, ny vahiny dia tokony hanana 5,5 € farafaharatsiny amin'ny kaontiny manokana. Ny vidin'ny fividianana trano dia tsy voafetra amin'ny lafiny rehetra. Ho an'ny fomba fisoratana anarana dia mila mandoa € 2 € eo ianao.
Amin'izao fotoana izao, misy programa iray atolotra any Montenegro izay ahafahanao manome fahazoan-dàlana hipetraka eo an-toerana ho an'ny tompona trano rehetra ao amin'ny firenena. Mba hanaovana izany dia mila manome porofo ianao amin'ny fisian'ny 3,65 tapitrisa euro ao amin'ny kaontin'ny mpangataka. Safidy iray hafa ny manokatra orinasanao manokana eto amin'ity firenena ity.
Vola. Ny lalàna momba ny fifindra-monina eo an-toerana dia mahatoky ny mpampiasa vola. Mba hanokafana ny orinasanao manokana dia eto dia ampy ny manana renivola 1 €, ary ao amin'ny kaonty banky - 300 €.
Fepetra. Ny mpangataka dia tsy maintsy manana fiantohana ara-pitsaboana, vola ao amin'ny kaonty ary tsy misy firaketana heloka bevava.
Ny fomba tsotra indrindra hipetrahana any Suisse dia ho an'ireo vahiny manankarena indrindra. Ho an'ny solontenan'ny fifindra-monina VIP, ny fisoratana anarana ny fahazoan-dàlana hipetraka dia tsy mihoatra ny enim-bolana. Ny habetsaky ny fampiasam-bola amin'ity tranga ity dia tokony ho tena lehibe. Fa ny tombony azo amin'ny fiainana any Suisse dia betsaka kokoa - miainga amin'ny fari-piainana avo sy filaminana, hatramin'ny fivezivezena malalaka any amin'ny faritr'i Schengen.
Vola. Misy fomba roa hampiasana vola amin'ny totaliny:
Passive, amin'ny endrika hetra ampaham-bola aloa amin'ny tahirim-bolam-panjakana Suisse. 100 XNUMX Euros isan-taona ny habeny.
Fampiasam-bola amin'ny orinasa miasa - manomboka amin'ny 1 tapitrisa €.
Ny fomba fisoratana anarana dia handoa CHF 50 XNUMX.
Fepetra. Ny mpandraharaha rehetra maniry hisoratra anarana amin'ny orinasany any Suisse dia hiatrika fizotry ny fisafidianana matotra. Betsaka ny mpangataka, ary ny manampahefana dia misafidy izay mendrika indrindra amin'izy ireo. Noho izany, ny fandoavana ny hetra amin'ny vola mitambatra dia fomba iray azo antoka kokoa ahazoana fahazoan-dàlana honenana any Soisa.
Fahazoan-dàlana hipetraka any Eropa
Araka ny hitanao, ny fanjakana eropeana tsirairay dia manolotra safidy safidiny manokana. Noho izany, ny Rosiana rehetra te-hifindra any dia tsy maintsy miroso amin'ny mason-tsivana marobe. Ho an'ny olom-pirenena manan-karena, ny safidy mahasoa indrindra dia ny mampiasa vola amin'ny trano sy tany. Raha te-hifindra malalaka manerana ny Vondrona eropeana ianao dia mifidiana fahazoan-dàlana hipetraka any amin'ireo firenena Schengen.
↑ fahazoan-dàlana hipetraka any amin'ny fanjakana eropeana ↑ plus fahazoan-dàlana hipetraka any Eropa ↑ aiza ny mora indrindra sy ny fomba hahazoana fahazoan-dàlana hipetraka ↑ aiza ny fomba mora indrindra hahazoana fahazoan-dàlana hipetraka ↑ ny fomba hahazoana fahazoan-dàlana hipetraka ↑ mahazo fahazoan-dàlana hipetraka any Eropa ↑ ny fomba hahazoana fahazoan-dàlana hipetraka any Eropa ↑ aiza no mora kokoa ny mahazo fahazoan-dàlana hipetraka any Eropa ↑ fahazoana fahazoan-dàlana hipetraka any Eropa ↑ fahazoan-dàlana hipetraka any amin'ny fanjakana eropeana tsy eu ↑ fahazoan-dàlana hipetraka any amin'ny firenena eropeana tsy tafiditra ao amin'ny eu ↑ fahazoan-dàlana hipetraka tsy eu ↑ fahazoan-dàlana hipetraka tsy any amin'ny firenena eu ↑ Fahazoan-dàlana hipetraka any Eropa ↑ Fahazoan-dàlana ao amin'ny EU ↑